Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် မီးရှို့မူများ ပေါ်ပေါက်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် တွင် ရခိုင်နှင့် မွတ်ဆလင်များ အကြားး တဘက်နှင့် တစ်ဘက် အပြန်အလှန် မီးရှို့မူများ ပေါ်ပေါက်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ မီးရှို့မူများ ဖြစ်နေသော ကျေးရွာများးမှာ ဂုတ်ပီထောင့်၊ အပေါက်ဝ၊ ရွှေလိူင်နှင့် တောင်ပေါက်ရွာ တို့တွင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ အပြန်အလှန် မီးရှို့မူများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ခြင်းမှာ ဒေသအတွင်း တာဝန်ကျနေသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီများ၏ လာဒ်ပေး လာဒ်ယူမူများနှင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်တိုင်း အရေးယူရန် ပျက်ကွက်ခြင်း များကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်တော် ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ ကျွန်တော် ကျောက်တော်မြို့ ကားဂိတ်ကို သြဂတ်စ်လ ၂ ရက်နေ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့မှာ အောက်ပိုက်သည် ရွာက မွတ်ဆလင် လူအုပ်က ညဉ့် ၂ နာရီတီးမှာ ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးတယ်။ ရွှေပြည်သစ် ကားးဂိတ် အပါအ၀င် တခြား အဆောက်အဦးတွေ ပြူတင်းတွေ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရတယ်။ မြို့ထဲက လူတွေနဲ့ လုံခြုံရေး ယူထား သူတွေ လိုက်သွားတော့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူတွေက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ရဲကို သွားတိုင်တောာ့ စစ်တပ်က အမိန့်မရတဲ့ အတွက် ဘာမှ အရေး မယူဘူး။ ဒီလို လုပ်တော့ ရခိုင်တွေက မကျေနပ်မူတွေ တိုးပွား လာကြတယ်” ဟု ကျောက်တော် ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျောက်တော်မြို့ အခြေစိုက် စကခ ၉ တပ်မမှူးအား ကျပ်သိန်း ၅၀၀ နှင့် တပ်ရင်းမှူးအား ကျပ်သိန်း ၃၀၀ စီ မွတ်ဆလင် ကျေးရွာများကို ကာကွယ်ရန် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက လာဒ်ငွေ ပေးထားသည်ဟု စွပ်စွဲမူများလည်း ကျောက်တော်တွင် သတင်း ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ပြောသည်။
“ အခုလို အကြမ်းဖက်တဲ့ သူတွေကို မွတ်ဆလင်တွေ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရခိုင်တွေဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်း အရေး မယူတော့ တဘက်နဲ့ တဘက်ကြားမှာ မကျေနပ်မူတွေ တိုးပွားလာပြီး အခု အပြန်အလှန် မီးရှို့မူတွေ ပေါ်ပေါက် လာတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
သြဂတ်စ်လ ၅ ရက်နေ့က မီးရှို့မူ ဖြစ်ပွားရာ အပေါက်ဝတွင် ၂၅ ဆောင်၊ ဂုတ်ပီထောင့်တွင် အိမ်ခြေ ၅၃ ဆောင်နှင့် ရွှေလိုင်တွင် ၃၅ ဆောင် ပါဝင်သွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အများစုမှာ မွတ်ဆလင် နေအိမ်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်တော် တောင်ဘက် တမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသော တောင်ပေါက်ရွာမှ ရခိုင် အမျိုးသား ပိုင်ဆိုင်သော ဆန်စက်ကြီး တလုံးကို သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့ ညဉ့်အချိန်တွင် မီးရှို့ခံရပြီး ဆန်အိပ် ၁၀၀ နှင့် စပါးတင်း ၄၀၀၀ မီးထဲ ပါသွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခု မီးရှို့မူများကို တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲနေကြပြီး မွတ်ဆလင်များမှာ ကျောက်တော်တွင် လူနည်းစု ဖြစ်သဖြင့် ပိုမို ထိခိုက် ပျက်စီးဖွယ်ရှိသည်ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:04
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် မီးရှို့မူများ ပေါ်ပေါက်နေ . All Rights Reserved